सद्‌भाव भड्किन्छ, व्यापार खस्किन्छ भनेर दुर्व्यवहार सहने ? — Sanchar Kendra
१कस्तो रहनेछ आजको मौसम ?
२खुमलटारमा माओवादी पूर्व स्थायी समिति बैठक जारी, पदाधिकारी टुंगो लगाउन कसरत
३नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
४सकियो नेपाली काँग्रेस पदाधिकारी बैठक, के-के विषयमा भयाे छलफल ?
५एकैदिन ९० जनामा देखियाे कोरोनाकाे संक्रमण
६इन्धन अभावले श्रीलंकामा विद्यालय बन्दको घोषणा
७नेकपा (बहुमत) निकट युवा जनस्वयंसेवक नेपालको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरु
८पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो टुङ्गो लगाउन प्रचण्डलाई अख्तियारी
९रामेछापमा बस दुर्घटना- १३ जनाको मृत्यु, २४ घाइते, नाम्लिस्टसहित
१०भारतमा भेटियो कोरोनाको नयाँ सब–भेरियन्ट
११पेट्रोल र डिजेलमा फेरी मूल्यवृद्धि, अब लिटरलाई कति ?
१२इण्डिगोका धेरै कर्मचारी एकै पटक विरामी बिदा लिएर एअर इण्डियामा अन्तर्वार्ता दिन गएपछि.…
काठमाडौँ। अन्जान व्यक्तिहरू अन्जानमा छोइएनन् भने, मान्छेका कुमहरू एकअर्कासँग ठोकिएनन् भने, उनीहरूका हातगोडा चलेनन् भने भीड हुन सक्छ त ? कुनै सिनेमाको भीड होस् या जेब्रा क्रसबाट बाटो काटिरहेको भीड ।
कुनै कलेज, इन्स्टिच्युट होस् या गाडीमा प्रवेश गर्दा र निस्किँदा हुने भीड । कुनै विवाहको भोज–भतेरमा हुने भीड होस् या जात्रा महोत्सवमा हुने भीड । कुनै पार्टीको चुनावी आमसभामा हुने भीड होस् या कुनै आन्दोलनमा हुने भीड ।
कुनै बसपार्कमा हुने भीड होस् या पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभागमा लागेको भीड । त्यहाँ अधिक मान्छेहरू एकाअर्कामा ठोकिएकै हुन्छन् । अधिकका हातहरू एकअर्काको शरीरमा छोइएकै हुन्छन् । कतिपयका खुट्टा टेकिएका हुन्छन् । कतिपयका जुता फुत्किएका हुन्छन् । जुत्ता फुत्किँदा कतिपयको मुखबाट गाली पनि फुत्किन्छ ।
सरी ! सरी ! भन्दै केहीले माफी पनि मागिरहेका हुन्छन् । कोहीले लफडा गर्छन् । कोहीले माफी माग्छन् । कोही लक्ष्यतर्फ लम्किन्छन् । कतिपय भीडमा नयाँ मान्छेसँग ठोक्किँदा परिचय हुन्छ, मित्रता कायम हुन्छ । तर, त्यही भीडमा ठोकिएर कोही जानीजानी फाइदा उठाउँछन् । निहुँ खोज्छन् । गरगहना चोर्छन् । जिस्काउँछन् । यौन दुर्व्यवहारसम्म गर्न भ्याउँछन् ।
केही समयअघि दुर्व्यवहारको यस्तै एउटा घटना बाहिरियो । अन्ततः फुर्वा र मिरुनाले एकाअर्कासँग माफी मागेर सम्झौता भयो ।
भीडमा नियतवश गोप्य अंग छुने, चिमोट्ने, जिस्काउने जस्ता गलत हर्कतबाट मिरुना मात्रै नभएर थुप्रै नेपाली महिला पीडित छन् । प्रतिक्रिया जनाउने उनी थिइन् । पीडित नभएको भए प्रतिक्रिया किन जनाउँथिन् होला र ?
यौन दुर्व्यवहार भनिसकेपछि सम्झौता गर्न किन पुगिन् ? कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने होइन र ? कसैले आफ्नो जात र धर्म, लिंग र सम्प्रदायको धाकधम्की देखाएर दुर्व्यवहार छोप्न सक्छ ? अनि दुर्व्यवहारको आवाज उठाउँदा सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ वा व्यापार खस्किन्छ भने चुप बस्ने ?
जन्म दिने बुबाले नै छोरीमाथि बलात्कार गरेका घटना छन् । तर, के भाइ नाता बनाउनासाथ दुर्व्यवहार नहुने हुन्छ र ? नायिकाको विरोध गर्नेहरूले भिक्षुको पहिरन लगाएका व्यक्तिले दुर्व्यवहार गर्न सक्दैन भनिरहेका छन्, कसरी भन्न सकेका होलान् ?
के अपराध गर्नेको छुट्टै पहिरन हुन्छ र ? छुट्टै जात हुन्छ र ? किन जातका नाममा विरोध र समर्थन गरियो ? किन जातका आधारमा दोषी र निर्दोषी घोषणा गर्न थालियो?
काठमाडौँ जस्तो ठूलो सहरमा गुड्ने सार्वजनिक गाडीमा जानीजानी महिलाको शरीरमा छुन खोज्नेहरू यत्रतत्र छन् । हिँड्ने गोरेटोमा कोही नठोकिऊन्, नछोइऊन्, भन्दाभन्दै कैयौँ ठोकिन्छन्, कैयौँ छोइन्छ्न । तर, अत्तोपत्तो हुँदैन । भीडमा कसैलाई छुनु छैन तर पनि छुन पग्छन् कैयौँ महिला र पुरुषका हात, कुम अनि खुट्टाहरू ।
मान्छे भीडबाटै प्रतिस्पर्धा गर्दै सफलताको गन्तव्यमा पुग्छ ।
ज्ञान लिन कहिले कलेजको भीडमा पुग्छ कहिले मनोरञ्जन लिन सिनेमा घरको भीडमा पुग्छ । कहिले देश बनाउने अभिप्रायले आमसभामा पुग्छ । कहिले पीडितहरूको न्यायका निम्ति आन्दोलनको मोर्चामा पुग्छ । म आफूलाई सचेत र जतन गर्ने नै छु । तपाईंहरूले पनि आफूलाई सचेत र जतन गर्नुहोला । किनकि, भीडमा कोही उद्देश्य चुम्नका लागि लम्किँदा अन्जानमै ठोकिएका हुन्छन् त कोही नियत नै राखेर जानीजानी ठोकिन्छन् ।
अन्जानमा ठोकिएकाहरूले माफी मागेका हुन्छन्, माफी दिनुहोस् । उनीहरूलाई कसैलाई छुनु छैन, केवल आफ्नो उद्देश्य चुम्नु छ । गलत र झुठो आरोप कसैलाई नलगाउनू । यसले मान्छेलाई बाँचुन्जेल निकै अपमानित बनाउँछ । हतारमै आरोपीलाई अपराधी बनाएर प्रचार गर्ने र मानहानी गर्ने, बेइज्जत गर्ने गर्नु हुँदैन ।
तर, केहीको उद्देश्य भीडमा महिलालाई छुने, चिमोट्ने, ठोक्किने हुन्छ । यस्ता ‘ब्याड टच’लाई भने माफीभन्दा पनि कानुनी सजाय दिनुपर्छ । न्याय निरूपणमा साथ दिनुपर्छ । महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार तथा हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।